Nkume okirikiri: ihe ọ bụ, njirimara na ọkwa | Network Meteorology
Mgbe anyị na-ekwu maka ya nkume okirikiri ma ọ bụ usoro ihe na-edozi ahụ adịghị ezo aka na usoro nke usoro nke ụfọdụ ihe ndị na-ahụ maka ịnweta na nkume na-agbanwe n'oge ha nọ n'ime ala. Usoro niile nke okirikiri na-agụnye usoro mgbanwe nke ọ na-etolite na mgbanwe ya. Na njedebe, a na-eme mgbanwe dị iche iche na usoro oge okirikiri nke a na-emeghachi ogologo oge.
N’isiokwu a, anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara okirikiri igwe na mkpa ọ dị.
1 Kedu ihe bụ okirikiri okirikiri
3 Nkebi nke okirikiri okirikiri
3.1 Ngosipụta oge
3.2 Oge ihu igwe
3.3 Oze mbuzo
3.4 Usoro njem
3.5 Sedimentation na ìgwè na-adọ
4 Rock okirikiri: solubilization, absorption na ndu ntọhapụ
Kedu ihe bụ okirikiri okirikiri
Anyi aghaghi iburu n’uche na ya bu usoro ndu biogeochemical nke nchekwa nke ihe puru iche putara n’ime ala. Ihe omuma niile nke ugbua bu ihe ndi ozo, nke a makwaara dika ihe ndi ozo. Dịka ọmụmaatụ, anyị nwere ụfọdụ ihe ịnweta dị ka Ha bụ sọlfọ, potassium, site, calcium na ọla ndị ọzọ dị arọ.
Nkume okirikiri na-amalite site na ikpughe nkume na ihe ndị a site na omimi n'ime eriri. A pụkwara ịchọta ha na mpaghara dị nso na elu ala. Mgbe ekpughere ha, ha doro usoro ihu igwe, nke ha na-ata ahụhụ site na ndị ọrụ mpụga. N'ime ndị ọrụ mpụga ndị a, anyị nwere ihe ikuku, mmiri na ndu.
A na - ebugharị ihe niile na - emebi oge oge na mmiri, ike ndọda bụ ikuku. Ozugbo ebugharịrị ihe ahụ, ọ ga-anọgide na-adị ebe nwere usoro sedimenti. Sedimentation abụghị ihe ọ bụla karịa usoro ebe ntinye ego nke ihe ịnweta ihe na-ewere ọnọdụ na mkpụrụ. Ta ahịhịa n'akọbara ihe karịrị puku kwuru puku afọ, n'ihi ya, anyị ga-eburu n'uche na nke a tụrụ na a ọnụ ọgụgụ nke geological oge. N'ime ọtụtụ nde afọ ndị a, ha na-enweta usoro mgbagwoju anya na ịkpụzi simenti.
Nke a bụ otú e si eme ka mmiri gụchaa, nke mere ya ji gbanwee nkume siri ike. Usoro a na-ewere ọnọdụ na nnukwu omimi. Na mgbakwunye, n'ime oke okwute enwere usoro dị n'etiti nke na-erukwa n'ihi usoro ndu. N'ime usoro ndụ anyị, anyị na-ahụ mbelata na mmịpụta nke ihe dị ndụ. Dabere n'ụdị ịnweta, ihe mejupụtara ya na ihe ya, yana ọnọdụ nke gburugburu ebe obibi, osisi, nje ma ọ bụ anụmanụ nwere ike itinye obi gị dum wee banye webs. Ozugbo mineral etinyewo obi ha na-ọzọ na-anyụpụ ma ọ bụ tọhapụrụ site ọnwụ nke organism. Nke a bụ otú usoro ahụ si emechi.
Anyị ga-enyocha ihe ndị bụ isi njirimara usoro okirikiri. Anyị maara na ọ bụ otu n'ime ụdị atọ nke usoro biogeochemical na njirimara ya bụ njirimara matrix dị na lithosphere. Usoro mmemme a nwere nkuzi nke aka ha nke ana akpo sedimentology. Zụ Ọ bụ sayensị bụ ọrụ maka ịmụ okirikiri oke na mkpa ọ dị na geology nke mbara ala.
A na-ahụ oge nke oge ahụ site n'oge ọ na-ewe iji mezue ọkwa dị iche iche. Oge a na-adịkarị ogologo iji tụọ nha mmadụ. A ghaghị tụọ ha n'ime ọtụtụ nde afọ ebe ọ bụ na mineral na-agbanye na nkume ruo ogologo oge. Nkume ndị a na-adịkarị n’ebe miri emi nke ala ụwa. Nrụgide nke ike ndọda na ihe ndị ọzọ bụ otu n'ime isi injin iji nye mmalite nke usoro nkume.
Nkebi nke okirikiri okirikiri
Ka anyị lee ihe dị iche iche nke usoro okirikiri. Ọ dị mkpa ka anyị ghara ichefu eziokwu ahụ bụ na ọ bụghị ajọ ifufe nke usoro ya na-agbaso usoro edere mgbe niile. Ebe ọ bụ na mgbanwe dị iche iche na ihe dị iche iche na-ejikarị emetụta ha, usoro nwere ike ime ma ọ bụ gbanwere ọtụtụ oge n'oge usoro ahụ.
Ọ bụ oge a na-akpụ okwute n'akụkụ ala ala mmiri ụfọdụ, ọ na-emekwa ụfọdụ ọdachi. A chịkọtara usoro ndị a n'ọtụtụ dị iche iche, okpukpu na elu nke teren. Ndị a n'ala mmegharị ndị tumadi ruru ka Efere Tectonic na mmeghari ya. N'ụzọ dị otú a, e gosipụtara nkume ndị ahụ na ihe nke gburugburu ebe obibi dị iche iche, ma ha bụ edaphic, ikuku, hydrological ma ọ bụ ndu.
Diastrophism abụghị ihe ọzọ karịa ngwaahịa nke mmegharị dị n'etiti convection ugbu a nke uwe elu ụwa. Emegharịrị mmegharị ndị a site na ihe ngosipụta mgbawa nke na-ekpughe nkume ndị ahụ n'ụzọ kpụ ọkụ n'ọnụ.
Na ihu igwe ihu igwe nkume ekpughere na-emebi emebi n'ime obere iberibe, Nke a bụ ihu igwe nkịtị, ma ọ bụ mgbanwe na ngwongwo ya, nke a bụ ihu igwe. Ọ bụ isi ihe dị na nhazi ala ma ọ nwere ike ọ bụghị naanị nke anụ ahụ ma ọ bụ nke kemịkal, kamakwa ihe ọmụmụ.
N'oge a, anyị nwere ike ifufe na mmiri ozuzo ozugbo na oke okwute. Ndị a bụ ngwaahịa nke ihu igwe nke gunyere ala guzobere. Mbido mbuze na-agụnyekwa ibuga ihe ndị emetụlarị na mbụ. Ndi mmadu abuo dika ikuku na mmiri ozuzo na-ebuso ya agha.
Ndị ọrụ a na-ebu ngwongwo ịnweta, ma ọ bụ mmiri, ikuku ma ọ bụ ike ndọda n'onwe ya. A na-ebu ha gaa ogologo oge, ọ bụ ezie na ọ dabere na nha ha nwere ikike ibu akọwapụtara.
Sedimentation na ìgwè na-adọ
Ọ na-agụnye ntinye nke ihe ebugharị n'ihi nbelata ọsọ nke ụzọ njem na mmetụta nke ike ndọda. O nwere ike ịbụ a fluvial, tidal ma ọ bụ seismic sedimentation.
Rock okirikiri: solubilization, absorption na ndu ntọhapụ
Mgbe ihu igwe nke ihe okwute niile emeworị, mgbasa nke mineral ndị a tọhapụrụ nwekwara ike ime. Ihe ndị dị ndụ nwekwara ike itinye obi gị dum. A na-eri ahịhịa na ahịhịa ya na ahịhịa ya na-eri ya. Na njedebe, ọ bụ decomposers na-enyefe mineral na ntanetị nri.
Akụkụ ikpeazụ nke usoro okirikiri bụ lithification. Ha na-ekewa compaction na simenti. Higba akwụkwọ bụ ihe ọzọ karịa ịmepụta nkume ọhụrụ. Ọ na - eme mgbe mineral mejupụtara na - akpụ usoro ndị na - esochi ma na - enwe nnukwu nrụgide. N'oge mkpakọ, nrụgide nke ihe mkpuchi sedimenti na-arụ bụ ndụ na usoro ndị ọzọ.
N'ikpeazụ, na mpaghara nke ciment, na-etinye ihe ntinye ihe n'etiti ihe ndị ahụ. Ndị a cementitious ahụ na-abụkarị calcite, silica, oxides na ndị ọzọ na-ahụ maka crystallizing mejuputa ihe. N'ụzọ dị otú a, a na-emepụta nkume siri ike.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere okirikiri okirikiri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Nkume okirikiri